Iindaba -Chitha ukulandelelana kwe-Scaffolding
Inkcitho yeRinglock Abanye abantu bacinga ukuba ulwakhiwo kufuneka lwenziwe ngolandelelwano, kwaye akunamsebenzi xa uqhaqha, lunokuchithwa ngokungaqhelekanga, enyanisweni, ukudilizwa kwe ukuwela Kuyafuneka ukugxininisa iodolo, kuphela ukuqonda okuhle kokuchithwa komyalelo wokukhulisa ukuze kufezekiswe iziphumo kabini ngesiqingatha somzamo.
(1) susa i-handrail ephezulu kunye nekholamu yokuthuka kwi-straddle kuqala, emva koko ususe ipleyiti yonyawo (okanye isakhelo esithe tyaba) kunye nezinyuko, emva koko ususe itrasi ethe tye kunye nenkxaso yesikere.
(2) Ukuqala ngentambo ephezulu, susa inkxaso yomnqamlezo, kwaye kwangaxeshanye ususe iqhina lodonga oluphezulu kunye nesakhelo esingaphezulu.
(3) Qhubeka nokususa isakhelo sokukhawulezisa kunye izixhobo Ukuphakama kwe-cantilever kwe-scaffold akuyi kudlula kumanyathelo amathathu, kungenjalo kuya kudityaniswa iqhina lethutyana.
(4) eqhubekayo yolungelelwaniso phantsi dismantle.For amaqhina eludongeni, ileja elide tyaba kunye isikere izincedisi, ziya kususwa kuphela emva kokuba itheko ludiliziwe kwisakhelo semvula efanelekileyo.
(5) susa umgangatho, isakhelo esisezantsi sesakhelo kunye namanye amalungu.
(6) susa isiseko kwaye ususe ipleyiti yephedi kunye nebhloko yephedi.